Umkhiqizi nomhlinzeki we-China Multi-bag Hlunga | Qiangzhong
Izihlungi zesikhwama zisetshenziselwa ukuhlunga ukungcola emanzini, iziphuzo, naseziphuzweni zamakhemikhali. Izikhwama zokuhlunga zitholakala ku- # 1, # 2, # 3, # 4, njll, futhi ibhasikidi yesihlungi sensimbi engenasici iyadingeka njengokwesekwa. Isihlungi sinendawo enkulu yokuhlunga, ukusebenza kahle kokuhlunga, ukusebenza okulula kanye nezindleko zokugcina eziphansi. Ukuphakama kwesihlungi kungashintshwa ngezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene.
Ukudla: iziphuzo, nezimboni zotshwala, ezihlangabezana nezidingo zenhlanzeko
Ukuhlunga kwemikhiqizo ye-petrochemical and chemical
Ukuhluzwa koketshezi ekuphrinteni, ifenisha, njll.
Amapharamitha Wezobuchwepheshe Oyinhloko Wesihlungi Sesikhwama Se-Side-entry
Main Amapharamitha Wezobuchwepheshe bokuhlunga kwesikhwama se-Top-entry
Liquid Hlunga Bag
Uhlobo: isikhwama sesihlungi
Isicelo: ukuhlunga ketshezi
Isikhwama Sezinto: PE / PP / enye
Isikhwama esijwayelekile sokuhlunga uketshezi senziwe nge-PE (polyester) fiber, PP (polypropylene) indwangu yefayibha, noma i-MO (monofilament) mesh. I-PE ne-PP yizinto zokuhlunga ezi-ntathu ezijulile. I-100% yefayibha emsulwa icutshungulwa ngesibhakela ngenaliti ukwakha ungqimba wesihlungi esinamacala amathathu, entanta phezulu futhi sibuhlungu. I-100% yefayibha emsulwa ifakwe ngenaliti kusendlalelo sesihlungi esinamacala amathathu, esifudumele kakhulu futhi esibuhlungu. Kubonakala ngesakhiwo esinemicu esixekethile, esingakhuphula umthamo wokungcola. Lesi sihlungi siyindlela yokusika kabili esusa ngempumelelo izinhlayiya eziqinile nezithambile, okuvumela izinhlayiya ezinkulu ukuba zibhajwe ebusweni be-fiber ngenkathi izinhlayiya ezinhle zibhajwe ekujuleni kwesihlungi. Iqinisekisa ukuthi ngeke yephule ngenxa yengcindezi eyengeziwe ngesikhathi sokusetshenziswa futhi inekhono eliphezulu lokuhlunga. Ngaphezu kwalokho, ingaphandle lomshini ukwelashwa okushisa okushisa okuphezulu, okuwukuthi, ubuchwepheshe bokunciphiswa okusheshayo (ukwelashwa kwe-calendering), okungavimbela ngempumelelo imicu ekulahlekelweni ngumthelela osheshayo we-liquid ngesikhathi sokuhlunga. Ngaleyo ndlela, ukungcoliswa kwe-filtrate ngenxa ye-fiber detachment kanye nokuvalwa kwepore yokuhlunga okubangelwa ukwelashwa okujwayelekile kungagwenywa, futhi impilo yesikhwama sesihlungi iyandiswa. Ngaphezu kwalokho, lo mehluko wengcindezi mncane, ongathinti izinga lokugeleza, nokunemba kwawo kungu-1-200microns
I-MO yenziwa ngokungapholi kwenayiloni okungakhubazeki, kwalukelwa enetheni ngokusho kokucacisiwe, futhi kuba yicingo elilodwa ngemuva kokusetha kokushisa. Ibonakala ngamandla amakhulu futhi ayikhubazi ngenxa yezinguquko kwingcindezi. Ingaphezulu lokwelukiweyo le-monofilament libushelelezi, kulula ukulihlanza, futhi lingasetshenziswa kaninginingi. Futhi kufanelekile ukuhlunga ezinye iziphuzo ezinokungcola okuphezulu, okunganciphisa izindleko zokuhlunga, futhi ukunemba kwayo kungama-20 〜 550 mesh (25 ~ 840μm).
Hlunga isikhwama sokulungisa impahla: insimbi engagqwali, indandatho yensimbi ehlanganisiwe, iringi yeplastiki ye-polyester / polypropylene
Izinto: Polyester (PE), Polypropylene (PP).
L = umugqa wolayini abahlanu - okokusebenza kwendandatho (insimbi evamile yensimbi, insimbi engagqwali)
A = isikhwama 1, B = isikhwama 2, C = isikhwama 3, D = isikhwama 3
Indawo yokuhlunga: isikhwama 1 = 0.25, isikhwama 2 = 0.5, isikhwama 3 = 0.8, isikhwama 3 = 0.15
Ukubekezelelana ngobukhulu mm:> 0.3-0.8> 0.3-0.8> 0.3-0.8> 0.3-0.8
Ukuphela kokuhlunga (pm): 1, 3, 5,10,15,20,25, 50,75,100,150,200
Umehluko Wokusebenza Kokucindezela Okukhulu (MPa): 0.4, 0.3, 0.2
Izinga Lokushisa Eliphezulu (° C): I-Polyester (PE): 130 (i-180 esheshayo); I-Polypropylene (PO):
90 (ngokushesha 110)
Hlunga Uhlelo Lokusebenza
Langaphambilini Isihlungi se-Sanitary esisodwa
Olandelayo: Precision Hlunga
Micropore Hlunga Igobolondo
Isihlungi seMicropore ulwelwesi
Isitsha Sezihlungi Sokuhlanza Sanitary
Engagqwali Isiyingi Manhole LIWI
Isihlungi se-Sanitary esisodwa
I-Tank Yokukhishwa Kwekhofi Ehambayo
I-500L ethinta ukuhlakazeka kwe-emulsifying tank
Ipuleti nesihlungi sefreyimu
Isitoreji Sethangi Lamaselula